Notsapainay ny Honor 6, avo lenta ho an'ny 299 euro | Androidsis
Honor 6, fahatsapana voalohany an'ny finday avo lenta Huawei mahery
Alfonso de Frutos | | Huawei, MWC, hevitra
Huawei dia nitondra ny MWC feno aminy sonia vaovao Honor. Fantatr'ilay mpanamboatra fa tsy dia tian'ny eropeana ny anarany, ka nitady anarana manintona kokoa ho an'ny vahoaka tandrefana, Honor, ary andalana fitaovana izay miaraka amin'ny famaranana sy ny toetra teknika hahatonga anao ho tia.
Omaly dia nasehonay anao rehetra ny tsiambaratelon'ny Honor 6 Plus, ilay Titan lehibe an'ny fianakaviana Honor vaovao. Ankehitriny dia anjaran'ny zandriny lahy, ny Hajao 6, terminal misy toetra mampisondrotra azy eo an-tampon'ny sehatra amin'ny vidiny mamaky tany
1 Famolavolana sy fikarakarana mahafinaritra
2 Honor 6, finday avo lenta mahery vaika latsaky ny 350 euro
3 Fakan-tsary, iray amin'ireo tanjaky ny Honor 6
Famolavolana sy fikarakarana mahafinaritra
Huawei dia mitandrina tsara foana mba hahafahan'ny terminal farany avo lenta farany vita. Amin'ity tranga ity dia namonjy vola ny mpanamboatra mampiasa plastika amin'ny lamosina ary vera eo aloha, na eo aza ny mikasika azy dia sarotra ny mahatsapa azy
Na ny vatan'ny vatanao aza, izay toa vita amin'ny aliminioma, mampiasa polycarbonate marina izy ireo. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy lazaina fa nanao asa tsy lavorary ilay mpanamboatra aziatika.
Ny fihazonana dia ampy, ny terminal dia mahazo aina amin'ny tanany sy ny azy refy 139.6 x 69 x 7.7 mm miaraka amin'ireo 130 grama manaova lanjany tsara ny Honor 6
Honor 6, finday avo lenta mahery vaika latsaky ny 350 euro
Ny fahombiazan'ny Honor 6, na dia tsy anisan'ny tsara indrindra eny an-tsena azaary misy ny fari-bola be indrindra ao amin'ilay sehatra Misaotra ny efijery 5-inch misy azy miaraka amin'ny teknolojia incell izay mahatratra ny vahaolana feno HD.
Ny loko dia toa mazava sy maranitra, ankoatry ny manana zoro fijery mihoatra ny marina. Amin'ity lafiny ity dia tsy misy na inona na inona manohitra, ampahany noho ny mahavariana dehakitroky ny pixel, 445pp.
Ary koa eo amin'ny sehatry ny efijery, manana safidy isika miovaova ny mari-pana amin'ny loko mangatsiaka na mangatsiaka kokoa, zavatra tiako be dia be satria afaka ampifanarahina amin'ny mpampiasa rehetra.
Amin'ny tranga Honor 6 dia mahita processeur isika Kirin 920 octa-core 1.7 GHz izany, miaraka amin'ny RAM 3 GB sy tahiry anatiny 16 GB izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny slot micro SD card-ny.
Fakan-tsary, iray amin'ireo tanjaky ny Honor 6
Sony dia mpanjakan'ny sensor, ary Huawei dia mpanjifa lehibe. Ary izany Honor 6 ve dia mampiditra lens Sony EXMOR RS IMX214 13 megapixel ary flash flash LED avo lenta izay maka sary mihoatra ny ampy.
Afaka nizaha toetra tao anatin'ny foibe izahay ary, raha jerena ny jiro mampidi-doza eo amin'ny toeran'ny mpanamboatra aziatika, ny marinatena tsara ny trondro. Asongadino ny fifantohana haingana, na dia rehefa maka macrophotographs aza dia somary lafo kokoa ny manomboka, na dia tsy manelingelina loatra aza.
Mikasika ny fakantsary eo aloha dia mahita a Lensa 5 megapixel izay manolotra fampisehoana mihoatra ny ampy haka sary azy manokana na hanaovana antso an-tsary. Tsy misy manohitra izany
Huawei dia efa nanamafy fa tsy ho ela dia hipetraka eo amin'ny tsena Eoropeana ny laharany Honor. Ary raha mikaroka kely amin'ny Internet ianao dia ho hitanao fa efa misy ny magazay manome ny Honor 6 amin'ny vidiny tena manintona: 299 euros.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 6, fahatsapana voalohany an'ny finday avo lenta Huawei mahery
tsara, haja 6 hatramin'ny 199 ?? Azonao lazaina ve hoe aiza no nahitanao azy? Misaotra
Fahadisoana amin'ny fanamarihako, dia mitentina € 299 €.
Miarahaba sy misaotra anao tamin'ny hevitrao
Marcos Riveiro dia hoy izy:
ny marina dia tsy ratsy tarehy io, na dia ho an'ny tsiriko aza dia mbola ao ambadik'i Xiaomi izy io
Valiny tamin'i Marcos Riveiro
MWC 2015: OS asehontsika amin'ny horonan-tsary ny LG Spirit
[Horonantsary] Telefónica dia manolotra ao amin'ny MWC15 Filip, ny Smartwatch ho an'ny ankizy mba hahitana azy ireo foana